Idle Miner Tycoon - Mine Manager Simulator 2.64.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.64.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Idle Miner Tycoon - Mine Manager Simulator
Idle Miner Tycoon - Mine Manager Simulator ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျအစဉျအမွဲထိရောက်သောမိုင်းမန်နေဂျာဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုသိချင်ပြီလော သင့်ရဲ့သတ္တုတွင်းနှင့်ပျင်းရိအမြတ်အစွန်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့်စက်မှုသူဌေးကြီးဖြစ်လာ, သင်၏အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာစေဖို့လုံလောက်တဲ့ငွေရှာ!
သင့်ရဲ့သန်းကြွယ်သူဌေးသတ္တုတူးဖော်ရေးအင်ပါယာကိုချဲ့ထွင်နှင့်သင့်သတ္တုတွင်း၏လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်မည်သူအထူးပြုမိုင်းလုပ်သားမန်နေဂျာနှင့်သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတစ်ခုထပ်တိုးပေး! ဒီစိန်ခေါ်မှုအပေါ် ယူ. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှငွေဝင်ငွေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာရှာဖွေတွေ့ရှိ - အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်း!
မလှုပ်မရှား Miner သူဌေးကြီးအမြတ်အစွန်းရရှိကာကျော်ကြားသန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာရန်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူသတ္တုတူးဖော်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းဘော်ရောနှောတစ်ခုခြင်း simulation ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုင်းလုပ်သားမဟာဗျူဟာ Simulator ကို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတတ်နိုင်သမျှကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ပျင်းရိအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိအရင်းအမြစ်များကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ပိုကောင်းအောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်: သင်မိုင်းကနေလုပ်ဝင်ငွေနှင့်အတူ, သငျသညျကိုငှားရမ်းခြင်းနှင့်မန်နေဂျာများနှင့်မိုင်းလုပ်သားပေးဆောင်, သင့်မိုင်းနှင့်သတ္တုတွင်းအဆောက်အဦးများအဆင့်မြှင့်တင်ရပါလိမ့်မယ် နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာတပြင်လုံးကိုသတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ကိုက်များအတွက်ပိုကောင်းအောင်။ မိုင်းမန်နေဂျာသူဌေးကြီးအရင်းရှင်ဖြစ်လာတစ်သန်းကြွယ်သူဌေးအင်ပါယာတည်ဆောက်နှင့်အကြီးအကျယ်အမြတ်ဝင်ငွေ။ အခြို့သောဝင်ငွေရဖို့နဲ့သင်တစ်ဦးကြွယ်ဝသောသူဌေးကြီးဖြစ်လာအထိဤမိုင်းလုပ်သားမန်နေဂျာ Simulator ကိုယခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်!
ပျင်းရိ mineral လုပ်ငန်း၏အင်္ဂါရပ်များ
ကိုအသာပုတ်များနှင့်အွန်လိုင်းမှပေါ့ပေါ့ clicker Simulator ကိုလိုပဲထိရန်မလို: ★သင့်ရဲ့ပျင်းရိဝင်ငွေတိုးရန်သင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်!
★ပျင်းရိငွေသား Get နှင့်ငွေ & ကိုရွှေဝင်ငွေ: သင်အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်နေလျှင်ပင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချ Continue!
★သင့်ရဲ့မိုင်းလုပ်သား '' လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်ဖို့မန်နေဂျာငှါး!
★ Prestige အင်္ဂါရပ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဆငျ့: သင်၏ဘီလျံနာအင်ပါယာခြင်း simulation တက် Build!
★အမှန်တကယ်သူဌေးများကဲ့သို့ 20 ကျော်အေးမြှုပ်မိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲ: ဤသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းကို Simulator ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးသတ္တုတွင်းသူဌေးကြီးသူဌေးဖြစ်လာ!
★ထက်ပိုမို 15 ကွဲပြားခြားနားသောအရင်းအမြစ်များအတွက်မိုင်း: ကျောက်မီးသွေး, ရွှေ, ပတ္တမြား, moonstone, နီလာခရမ်းရောင်, ကျောက်သလင်းနှင့်ကျောက်စိမ်း!
★ကဒီပိုက်ဆံနဲ့ဝင်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှု Simulator ကိုအတွက်ကျောက်မီးသွေးနှင့်ရွှေအထုစုဆောင်း!
★တောင်တက်ခြင်းနှင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားဦးဆောင်သူအတွက်နှင့်ဤပျင်းရိမိုင်းလုပ်သားခြင်း simulation အတွက်အချမ်းသာဆုံးစက်မှုဇုန်မန်နေဂျာသူဌေးကြီးဖြစ်လာ!
အဆက်မပြတ်ထိရန်မလိုဘဲသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာခြင်း simulation ကို automation ကသူဌေးကြီးဘီလျံနာဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းကိုအမိအရဆုပ်ကိုင်။ ငွေရတတ်သောသူ Get အသစ်မြှုပ်မိုင်းဝယ်ယူရန်နှင့်အဆောက်အဦးကိုဝယ်ယူရန်ငွေသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်, ဤစွဲလမ်းသတ္တုတူးဖော်ရေးမဟာဗျူဟာ Simulator ကိုအစဉ်အမြဲအကြီးမြတ်ဆုံးသတ္တုတွင်းမန်နေဂျာသူဌေးကြီးဖြစ်လာ!
Facebook ပေါ်မှာမလှုပ်မရှား Miner သူဌေးကြီးလိုပါပဲ! ✔️
တစ် Message ပေးပို့ဖို့အခမဲ့ခံစားရ
- ကျနော်တို့အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေ '' တုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိရန်ပျော်ရွှင်များမှာ!
❤️သင့်မလှုပ်မရှား Miner သူဌေးကြီးအဖွဲ့❤️
Idle Miner Tycoon - Mine Manager Simulator အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Idle Miner Tycoon - Mine Manager Simulator အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Idle Miner Tycoon - Mine Manager Simulator အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Idle Miner Tycoon - Mine Manager Simulator အား အခ်က္ျပပါ
Idle Miner Tycoon - Mine Manager Simulator ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Idle Miner Tycoon - Mine Manager Simulator အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.64.1
ထုတ်လုပ်သူ Fluffy Fairy Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.fluffyfairygames.com/privacy
လက်မှတ် SHA1: AA:91:59:93:4C:B9:37:68:70:A7:F6:4D:38:43:EC:C5:75:D3:08:5F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Janosch Sadowski
အဖွဲ့အစည်း (O): Fluffy Fairy Games UG
နယ်မြေ (L): Karlsruhe
နိုင်ငံ (C): GER
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Baden-W?rttemberg
Idle Miner Tycoon - Mine Manager Simulator APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ